काठमाडौँ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्ट सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघको ४९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा नेविसंघ काठमाडौँले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘शुभकामना आदानप्रदान’ कार्यक्रममा देउवाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘निर्मला हत्याकाण्डका हत्यारालाई सरकारले बचाउने काम गरिरहेको छ, महङ्गी बढेको छ, कर बढेको छ, वर्तमान सरकारको अन्याय, अत्याचारविरुद्ध नेविसंघ जाग्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।
सभापति देउवाले विद्यार्थीसँगको छलफलमा नेविसंघको तदर्थ समिति छिट्टै गठन गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले वर्तमान सरकारले कुरा मात्र गर्ने तर काम नगर्ने गरेको धारणा राख्दै यसको विरुद्ध कांग्रेस एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘नेविसंघको कार्यसमिति चाँडो गठन हुन्छ, उक्त कार्यसमिति सङ्गठन विस्तार र सरकारको गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारले कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई मुलुकमा लागू गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘आगामी वर्षको स्वर्ण जयन्तीमा निर्वाचित कार्यसमितिले कार्यक्रम राख्ने गरी नेविसंघको सङ्गठन विस्तारमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्र भागमा उभिएको नेविसंघको महत्व अहिलेको अवस्थामा झन् बढेर गएको बताए ।
कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेविसंघको नयाँ कार्यसमिति तत्काल निर्माण गरेर नेविसंघलाई जागरण अभियानमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । नेविसंघ काठमाडौँका अध्यक्ष मनोज वैद्यले नेविसंघको कार्यसमिति तत्काल गठन गरेर युवा विद्यार्थीलाई संगठनप्रति समर्पित गराउन नेतृत्व तात्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
प्रकाशित ६ बैशाख २0७६ , शुक्रबार | 2019-04-19 08:27:35